Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mexico » Duufaanta Olaf ayaa isha ku haysa Mexico
Jebinta Wararka Caalamka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Mexico • News • jiga • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Duufaanta Olaf oo soo gaadhaysa sawir-qaadasho waxaa iska leh Channel-ka Cimilada
Duufaanta Olaf ayaa dabeylaheeda xooggan iyo roobka culus ku soo daabulaysa gacanka Baja California ee Mexico halkaas oo goobaha dalxiiska ay aad ugu badan yihiin aagga.
Sida laga soo xigtay Xarunta Duufaanta Qaranka ee Maraykanka, dabaylaha xoogga duufaanku waxay gaarayaan 105 mayl saacaddii iyo roobab da'aya ilaa 15 inji ayaa socon kara habeenkii oo dhan.
Duufaanta Olaf ayaa la filayaa inay u jihaysato waqooyi-waqooyi-galbeed waxayna sii xoogeysan kartaa ka hor inta aysan ku dhicin xeebta.
Dekadaha ayaa si ku -meelgaar ah loo xiray oo hoygii waa la furay. Meheradaha ayaa daaqadaha ka fuulay iyadoo dadku saf ugu jiraan inay ka iibsadaan raashinka iyo sahayda suuqyada waaweyn.
Marka haddii COVID-19 laga yaabo inuu sameeyay hal shay oo wanaagsan, waxay sababtay in inta badan meelaha lagu nasto ay lahaadaan wax ka yar 40% martida meesha loo socdo, kuwaas oo ku gabbanaya meeshooda.
Sida laga soo xigtay Xarunta Duufaanta Qaranka ee Maraykanka, dabaylaha xoogga duufaantu waxay socotaa 105 mayl saacaddii iyo roobab da'aya ilaa 15 inji waxay socon karaan habeenkii oo dhan oo laga yaabo inay sababaan daadad iyo dhiiqo.
Guddoomiyaha Ururka Hoteellada Los Cabos, Lilzi Orci, ayaa sheegtay in la joojiyay 37 duulimaad oo ah kuwa gudaha iyo kuwa caalamiga ah, waxayna ku qiyaastay 20,000 dalxiisayaal ajnabi ah inay aaggaas joogeen.
Iyadoo habeenku sii dhamaanayo, ayaa la filayaa in Hurricane Olaf ay u jihaysato waqooyi-waqooyi-galbeed waxayna sii xoogeysan kartaa ka hor inta aysan ku dhicin xeebta.
Sida laga soo xigtay Xarunta Duufaanta Qaranka, Olaf waxaa la saadaalinayaa inuu u dhaqaaqo meel aad ugu dhow ama ka durugsan qaybta koonfureed ee Baja California Sur caawa iyo Jimcaha. Xaaladaha duufaantu waxay ka bilaabantay qaybta koonfureed ee aagga digniinta duufaanta caawa waxayna ku fidi doontaa woqooyi ilaa Jimcaha.
Roobab culus oo la xiriira Olaf ayaa laga filayaa qaybo ka mid ah koonfurta Baja California Sur ilaa Jimcaha. Tani waxay keeni doontaa halis daadad iyo dhiiqo dhiiqo leh oo halis ku ah nolosha.
“Dabaysha Olaf dhab ahaantii way sii xoogaysanaysaa, mawjadaha ayaa ku dhacaya meel u dhow @MontageLosCabos. Olaf baaxad weyn ayaa barara iyo dabayluhu kor u qaadaan. ”
Cusboonaysiinta ugu dambeysay ee mareegaha wakaaladda dowladda ee Maamulka Badweynta iyo Hawada Qaranka ayaa leh:
Sawirro laga soo qaaday raadaarka Meksiko ee Cabo San Lucas, oo ay weheliyaan sawirro dayax -gacmeed, ayaa muujinaya in isha Olaf ay doonayso inay ku dhacdo meel u dhow San Jose del Cabo, iyo in xaaladaha duufaanta ee indha -indheynta waqooyi -galbeed ay durba ku fidday xeebta.
Dusha daruuraha dhagaxa ah ayaa qaboojiyay saacadihii la soo dhaafay, qiyaasta xoojinta ujeeddada laga leeyahay farsamada CIMSS ADT waxay gaartay 90 kt. Iyada oo ku saleysan tan iyo kororka abaabulka indha -indheynta ee sawirka radar Cabo, xoojinta bilowga ayaa la kordhiyay ilaa 85 kt.
“… Abaarihii 7:40 fiidnimo ee San Jose del Cabo, markii ay bilaabatay inay si dhab ah u dillaacdo, laakiin ka hor inta aysan korontadu darin.”
Dhaqdhaqaaqa hore waa 325/10. Olaf waa inuu sii wadaa inuu u dhaqaaqo waqooyi-galbeed ilaa waqooyi-waqooyi-galbeed 12-24-ka saac ee soo socota, iyadoo xaruntu ay u dhaqaaqeyso meel u dhow ama ka baxsan qaybta koonfureed ee gacanka Baja California inta lagu jiro waqtigan. Intaas ka dib, tiir heer dhexe ah oo xagga galbeed ka soo jeeda koonfur-galbeed ee Mareykanka waa inay keentaa Olaf inuu u leexdo xagga galbeed, tanna waa inay raacdaa dhaqdhaqaaq koonfur-galbeed ah maadaama duufaanta daciifaysa ay hagayso qulqulka waqooyi-bari ee hooseeya.
Tilmaamaha saadaasha wax yar bay iska beddeleen la -talintii hore, iyo raad -hayaha cusub ee saadaasha ayaa leh wax -ka -beddel yar oo ka yimid saadaashii hore.
Waxaa la filayaa in si tartiib tartiib ah loo daciifiyo inta lagu jiro 24 -ka saacadood ee ugu horreeya iyadoo Olaf uu la falgalayo gacanka Baja California. Markay duufaantu u leexato dhanka galbeed 24 saac kadib, waa inay ka gudubtaa biyaha qabow oo ay noqotaa hawo qalalan. Isku-darkaani waa inuu keenaa in qallalku xumaado, iyadoo nidaamku noqonayo mid kulaylaha ka dambeeya 60 saacadood iyo inta hadhay oo hoosaysa 72 saacadood. Saadaasha xoojinta cusub waxay leedahay waxoogaa isbeddello ah oo ka yimi saadaashii hore, waxayna ku dhex jirtaa baqshadda hagitaanka xoojinta.
Meksiko ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay si aad ah ugu kacsanayd. 2 maalmood ka hor, a Dhulgariir 7.1 ayaa ku dhuftay Acapulco.